Bliss by the Bay, Gibsons, BC, Canada - I-Airbnb
Gibsons, British Columbia, i-Canada
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Steve & Carol
I-suite yethu engu-1,000 sq. ft. suite inamagumbi okulala amathathu, indawo yokuhlala ethokomele neyokudlela, ikhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokugeza elibanzi elinendawo yokuhamba enkulu eshaweni kanye negumbi lokuwasha elihlukile. Indawo yokupaka engaphandle komgwaqo, ivulandi yangasese nendawo yokungena, kuhlanganiswe nesitoreji esivikelekile samabhayisikili nezinye izinto zezemidlalo.
Hamba nje kude nezindawo zokudlela eziyi-15, indawo yokucima ukoma, izitolo zekhofi, izitolo ezidayisa utshwala, izitolo ezihlukile, ukuhamba izintaba, ukuhamba ngebhayisikili, ukuqashwa kwemidlalo yamanzi nokuningi!
Izingadi ezinhle ezizungeze i-suite, izindawo ezimbili zokuhlala ezingaphandle ezihlanganisa i-BBQ, igumbi lokuhlala elikhulu eline-TV yesikrini esiyisicaba (ikhebula elixhumeke kwi-wifi ye-Netflix, njll), indawo yomlilo ethokomele, itafula lokudlela nesiqhingi esinezihlalo, ikhishi elihlome ngokuphelele (ngaphandle komshini wokuwasha izitsha) , Iwasha nokomisa, imibhede eyizindlovukazi emibili, umhume unosofa nombhede wamawele kanye negumbi lokugezela elineshawa enkulu yokumisa yodwa. Le suite ilungele wonke umuntu onobunzima ngezitebhisi njengoba isezingeni eliphansi.
5.0 · 145 okushiwo abanye
I-suite isendaweni enokuthula nethule kakhulu. Eduze nepaki yaseDougall (inkundla yokudlala kanye nenkundla yethenisi), idolobhana laseGibsons elihlanganisa izitolo eziningi zasendaweni, amathilomu, izindawo zokudlela, imizila emikhulu yamabhasi, amabhishi nezindlela.
Ibungazwe ngu-Steve & Carol
Sihlale sitholakala uma kudingeka kodwa siyabuhlonipha ubumfihlo bezivakashi. Siyathanda ukunikeza izincomo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Gibsons namaphethelo